October 21, 2020 adminLeaveaComment on सरकारले उपचार गर्दिनँ भन्दा जनताले ‘कर तिर्दिनँ’ भने देश कसरी धान्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने भनि गरिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन। सामाजिक संजाल ट्वीटरमा आज एक स्टाटस लेख्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न पनि गरेका छन् । प्रवक्ता शर्माले जनताले कर तिर्दिनँ भने कसरी धान्ने ? भनेर प्रश्न गरेका हुन् । सरकारले सबै को रोना संक्रमितको निःशुल्क […]